Ka Dar Oo Dibi Dhal! Tababaraha Xulka Portugal Ee Fernando Santos Oo Cusbo Sii Mariyay Khilaafkii Ronaldo & Sarri. - Gool24.Net
Tababaraha xulka qaranka Portugal ee Fernando Santos ayaa ka hadlay xaaladii khilaaf ee Cristiano Ronaldo iyo macalinka kooxdiisa Juventus ee Maurizio Sarri iyo haddii uu Ronaldo diyaar u yahay in uu xulkiisa Portugal u ciyaari karo.
Cristiano Ronaldo ayaa badal lagu saaray dariiqadii 55 aad ee kulankii axadii ay Juventus iyo AC Milan wada ciyaareen waqtigaas oo ahaa xiligii ugu horeeyay ee Ronaldo badal looga saaray kulan muddadii uu Juventus joogay.
Laakiin Cristiano Ronaldo ayaa warbaahinta caalamka ku qabsaday cadhadii uu ka muujiyay go’aankii uu Maurizio Sarri ku badalay wuxuuna iskaga baxay garoonka ay ka socotay ciyaartii Juventus iyo AC Milan.
Warar badan oo ay saxaafadu qortay waxa uu macalinka xulka Portugal ee Fernando Santos uu xaqiijiyay in dhibaatada kooxda Juventus iyo Ronaldo ayna saamayn ku yeelan doonin waajibaadkiisii xulka Portugal oo uu diyaar u yahay in uu ciyaaro.
Maurizio Sarri ayaa kadib kulankii AC Milan saxaafada u sheegay in Cristiano Ronaldo uu dhaawacyo jilibka, kubka iyo bawdada ah la soo dhibtoonayay bishii ugu danbaysay isla markaana ay taas ahayd sababtii uu xiliga hore u saaray.
Macalinka xulka Portugal ee Fernando Santos ayaa xaqiijiyay in Cristiano Ronaldo uu diyaar u yahay kulamada Group B ee isreeb reebka Euro 2020 isaga oo haysata fursada uu ku gaadhi karo goolasha qarniga ee xulkiisa Portugal oo uu haddaba 95 gool u soo dhaliyay.
Xulka qaranka Portugal ayaa u soo bixi kara tartanka ay koobkiisa difaacanayaan ee qaramada Yurub haddii ay ka guulaystaan Lithuania isla markaana ayna Serbia ayna ka guulaysan Luxemburg oo ay kulanka labaad Portugal iyagana balansan yihiin.
Haddaba Fernando Santos ayaa dabka ku sii shiday khilaafkii Maurizio Sarri iyo Cristiano Ronaldo isaga oo ku dooday in Ronaldo aanu wax dhaawac ah qabin oo uu taam yahay taas oo beeninaysa hadalkii Sarri.
Fernando Santos oo khilaafkii Ronaldo iyo Sarri shidaal ku sii shubaya ayaa yidhi: “Hadii aanu isagu taam ahayn xulka ugumaanu yeedhneen. Qof kastaaba waxa uu jecel yahay in uu ka hadlo wax ku saabsan Cristiano Ronaldo, sababtoo ah isagu waa ciyaartoyga aduunka ugu fiican”.
Intaas kadib Fernando Santos oo dhacdadii Ronaldo ee cadhadii uu Sarri kula dhacay ka hadlaya ayaa yidhi: “Haddii ay ciyaartoy kale ahaan lahayd sidaas umay xiiso badnaateen. Isagu waa taam wuxuuna doonayaa in uu ciyaaro”.
Hadalkii uu Sarri ku sheegay in saddex dhaawac oo kala duwan uu Ronaldo la soo tacaalayay bishii ugu danbaysay ee uu sababta ka dhigtay markii uu badalka muranka keenay ku saaray ayaa hadda u muuqda mid uu si cad u beeniyay Fernando Santos.
Haddii uu Cristiano Ronaldo ciyaaro labada kulan ee xulkiisa Portugal isku diyaarinayaan oo uu waliba dhamaysto min 90 ka daqiiqo waxaa markaas cadaan doonta in Sarri uu ka shalayn doono dhaawacyadii uu sababta badalkii Ronaldo ku sharaxay.